Degmada Douala 3ème ayaa bilaabaysa olole diiwaangelin dhalasho ah - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Degmada Douala 3ème oo bilaabaysa olole diiwaangalin dhalasho
Degmada Douala 3ème ayaa bilaabaysa olole lagu dhisayo shahaadooyinka dhalashada
Carruur badan ayaan ka diiwaangashanayn diiwaanka degmada laakiin weli waa inay tagaan dugsiga waxayna ka faa'iideystaan ​​xuquuqdan. Duqa magaalada Job Théophile Kwapnang ayaa go'aansaday in ay dadka ka doodaan.
Waxay ahayd iyada oo loo marayo warbixin guud oo dulsaar ah oo uu saxiixay isaga oo daabacay 28 bishii Maarso ee loogu talagalay dadka, ayuu ku dhawaaqay. Waxa uu rajeynayaa ololahan in tirada ugu badan ee carruurta ku nool ay fiinaali doonaan shahaadooyinka dhalashada.
Ololahan cusub ee lagu dhisayo shahaadooyinka dhalashada waxaa lagu hagaajinayaa dhammaan lakabyada, dadka waaweyn iyo carruurta, si loo abuuro sisin qaali ah, taas oo qayb ka ah nidaamyo maamuleed oo badan. Codsadayaashu waxay u baahan yihiin inay tagaan xarunta xaafadaha ee Logbaba maalin kasta oo shaqo ee diiwaangelinta. Hababka kala duwan ayaa loo fududeyn doonaa si loogu oggolaado dhammaan kuwa doonaya in ay si dhaqso ah u dhaqmaan falalkooda.
tallaabo Tani waa qayb ka mid ah iskaashiga ay la UNDP. Dawladda Cameroon, waxay ka warqabtaa muhiimada ay leedahay tayada adeegyadii la bixiyey, waxay ka go'an tahay MINFOPRA, iyadoo taageero ka heleysa Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay, hirgelinta barnaamij taageero 'Hagaajinta tayada ee Adeegga la siiyo dadka isticmaala (PAAQSU).
Dukumiintiyadii dawladaha hoose ee arimaha dukumiintiyada madaniga ah, oo soo bandhigay dhibaatooyin asaasi ah, ayaa awood u siiyey horumarinta in ka badan shahaadooyinka dhalashada 4000 ee 2016. Illaa hadda, hawlgalada isdaba-joogga ah ee shahaadooyinka dhalashada ee 15000 ayaa la bilaabey. Iyada oo qayb ka ah dadaalkaas, qorshe lagu magacaabo "hoolka dadweynaha ee dadka" ayaa la bilaabey iyada oo ujeedadu tahay in la keeno hoolalka magaalooyinka iyo beelahooda.
Out saaray dhallaanka, dhallinyarada, dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ka faa'iidaysan shahaadooyinka dhalashada, kuwaas oo hadda u saamixi doontaa in ay ka-faa'iideystayaal ah barnaamijyada kala duwan ee degdegga ah oo horumarsan ee ururada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee dadka dhalinyarada ah, haddii helo qaran ah kaarka aqoonsiga iyo kaadhka cod-, waxay tagaan dugsiga, iyo si loo yareeyo khatarta ka mid ah in ay qortaan in wayse iskhilaafeen Islaamka. wax soo saarka ee shahaadooyinka dhalashada sidaas daraaddeed u muuqataa sida aasaaska horumarinta gobolladan.
Pär Salma Amadore | Actucameroun.com
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/09/la-commune-de-douala-3eme-lance-une-campagne-detablissement-dactes-de-naissances/
[Tribune] Sibeth Ndiaye, geedka khariidadda kaynta - JeuneAfrique.com
Fox News maahan dhibaatada, waa saxaafada warbaahinta Fox News
Sidee James Holzhauer u ciyaaraa ciyaarta "Jeopardy!" - dadka